Ny zavatra maro ataon’i Gabriela García Calderón · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 12 Jolay 2019 7:05 GMT
(Lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Desambra 2014)
Inoana fa fantatrao i Gabriela García Calderón izay iray amin'ireo mpanoratra sy mpandika teny mavitrika indrindra ato amin'ny Global Voices (lahatsoratra GV maherin'ny 7.160 amin'ny teny Espaniôla ary maherin'ny 415 amin'ny GV teny Anglisy), ary vao haingana izy no Toniandahatsoratra nisolo toerana ho an'ny Amerika Latina, kanefa ho lazaiko anao ny zavatra roa momba azy izay inoana fa tsy fantatrao .
Nanatevin-daharana ny GV tamin'ny taona 2007 ity mpisolovava Peroviana mankafy ny fihinanana lomo saltado sy tacacho con cecina, karazan-tsakafo miavaka roa avy any amin'ny fireneny ity raha nahita ny dokambarotra tao amin'ny gazety iray nitadiavana mpandika teny mpilatsaka an-tsitrapo. Lasa mpanoratra izy tatỳ aoriana. Mandray anjara amin'ny tetikasan'i Eddie Avila, Rising Voices any Amazonia ihany koa izy ankoatra ny fanoratana sy fandikana lahatsoratra. Rariny noho izany raha anontaniana azy izay tena hitiavany indrindra ny GV?
“Tiako ny mamaky tantara momba ny fiainana andavanandron'ny olontsotra manerana izao tontolo izao, ireo izay manome antsika ny lanjan'ny maha-olombelona na aiza na aiza misy antsika, ny ahiahintsika, ny fitiavana sy ny tsy fitiavana zavatra mitovy. Tiako ny mahatsapa ho anisan'ny vondrom-piarahamonina samihafa toy izany, tena lehibe ary sady mbola tena mifanakaiky ihany koa.
Amin'ny ankapobeny, “Tiako ny milaza fa iray isika rehetra ato amin'ity tanànakely manerantany ity ary ny hahitana ny firaisana ao amin'ny fahasamihafana no tanjona”.
Anatin'ireo lahatsoratra maro izay nosoratany, nilaza i Gabriela fa tiany ny nitantara ny tantaran'ilay fianakaviana iray izay tafaraka indray taorian'ny taona maro nisarahana, na ilay iray momba ilay alika izay nihazakazaka roa kilometatra taorian'ny fiara mpitondra marary nitondra ny tompony ihany koa angamba.
“Angamba idealista aho, kanefa io no karazana tantara tiako hotantaraina”, hoy ity mpisolovava ity izay nanome toky fa nanjary lasa tsy nihambahamba kokoa izy hatramin'ny niasany tato amin'ny GV.
Tsy kisendrasendra akory no nanoratan'i James Michener ilay mpanoratra ankafiziny indrindra ny boky mitantara ny fotoan-dehibe teo amin'ny tantaran'ny olombelona, ​​saingy avy amin'ny fomba fijerin'ny olon-tsotra izay niaina izany.
“Saika, tahaka ny fitantarantsika ireo tantara ato amin'ny GV”.
Misaotra anao, Gabriela!
24 ora izayOseania